Iyo Apple Music webhu mutambi anotibvumidza isu kuisa data redu kuti titeerere kumimhanzi yedu | IPhone nhau
Iyo Apple Music webhu inoridza inotibvumidza isu kuisa data redu kuti titeerere kumimhanzi yedu
Kubvira payakatanga muna Chikumi 2015, mimhanzi yekufambisa yakwanisa kusvika vanopfuura mamirioni makumi mana vanyoreri, vese vachibhadhara, vachitosvika padyo nenhamba dzevanyori veSpotify, iyo parizvino inotenderera vanosvika mamirioni makumi manomwe nemashanu evashandisi. Kubva ikozvino, Apple yanga ichivandudza uye kuwedzera zvemultimedia zvemukati kukwezva vamwe vashandisi mukuwedzera pakusvika pane zvimwe zvibvumirano zvekutanga maalbham matsva chete
Asi mukuwedzera, zvinoita sekunge Apple inodawo wedzera mashandiro uye kushandiswa kwewebhu webhu iyo inoita kuti iwanikwe kune maartist, kuitira kuti vakwanise kupa muyenzaniso weavo albha nyowani ine playback muganho we30, 60 kana 0 masekondi. Sezvo isu tichigona kuverenga mukati Reddit, Apple yatanga kubvumira vamwe vashandisi kushandisa mutambi uyu kupinda muaccount yavo uye kuridza mimhanzi yavo yavanofarira.
Kana zvasvika pakuteerera Apple Music pane Mac yedu, isu tinomanikidzwa, hongu kana hongu, isu tinofanirwa shandisa iTunes, chishandiso chekuti makore apfuura zvave kurasikirwa nemabasa, uye izvo parizvino zvinongotibvumidza kudzoreredza yedu iPhone / iPad / iPod touch uye teerera kumimhanzi kunyanya, kungave kubva kuApple Music kana izvo zvatakachengeta pakombuta yedu.
Zvekuti webhu mutambi anotibvumidza kupinda iyo data yeedu mushandisi account, inosimbisa runyerekupe rwekuti Apple inogona tangisa mutengi mutengi weApple Music, mutengi uyo kuburikidza newebhu, semuenzaniso applemusic.com, iyo inotibvumidza kuteerera mimhanzi yedu yatinofarira tisingashandise iTunes.
Widget iyi inotibvumidza kwete chete kungoteerera kumumhanzi watinofarira, asiwo inotibvumidza kuwedzera nziyo kumatamba edu ekuridza, kuitira kuti kusakwana kwatingawane mupfungwa iyi kunyangarika zvachose. Pamwe mumaawa mashoma, panotanga WWDC, isu tichabvisa kusahadzika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » iTunes » Iyo Apple Music webhu inoridza inotibvumidza isu kuisa data redu kuti titeerere kumimhanzi yedu
Aya ndiwo mamwe emamonikisi matsva anosvika mukupera kwegore rino pane iyo iPhone
Dhawunirodha iwo eWWDC mapikicha e iPhone yako